Google Dudziro mune inoteedzera pasina kudiwa kwewebhu browser | Linux Vakapindwa muropa
Purogiramu google-shandura-ehl kodhi yakapusa inobvumidza iwe kushandisa muturikiri Google Dudziro mune yako terminal, pasina kukosha kwewebhu webhu. Sezvo ichi chiri chirongwa chinoumbwa neanosvika zana mitsara muAWK, zvinodikanwa kuve neGNU yekumisikidza yeAWK mitauro yekuronga mune yedu system.
Kuti uise pane Ubuntu kana vamwe Kugoverwa kunoenderana neizvi kuri nyore, isu tinongofanirwa kuisa iyo "gawk" uye "git" mapakeji kubva kunyaradzo kana kubva kuUbuntu Software Center. Iyo console nzira iri yakajairika uye iri kungo typing:
GNU Gawk ipakeji inoshandisa iyo AWK mutauro we * nix masisitimu sezvandataura uye Git ishanduro yekudzora software inogadzirwa naiye Linus Torvalds, sezvaunofanira kunge watoziva kare. Kana zvishandiso zvakafanira zvave kuiswa kuti tikwanise kuita mutengi weGoogle Dudziro ashande, isu tinofanirwa kuisa mutengi wacho seichi
Iye zvino wagadzirira kushandisa. Iine iyo raira "turikira" isu tinokwanisa kududzira mune koni pakati pemazana emitauro yakasiyana nenzira iri nyore. Iwe unogona kutarisa bhuku rekushandisa kuti udzidze zvakawanda nezvechirongwa ichi uye uone ese mikana yainotsigira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » google-translate-ehl: Google Dudziro mune yako terminal
Kusvika ikozvino, ini ndakakwanisa pamwe newebhu interface uye mukati memacs ine macro inoshandisa iyo apertium chirongwa. Ini ndakanzwisisa kuti kambani yakaipa yainge yabvisa sevhisi, kunyangwe saka pre-renji inoshanda kunyangwe peji revanhu risipo
maka kukanganisa panguva yekuisa
gawk: kuvaka.awk: 3: @include "inosanganisira / Commons.awk"
gawk: kuvaka.awk: 3: ^ zvisizvo char '@' mukutaura
gadzira: *** [trans] Kanganiso 1
Pindura kune slacksilver
Iye zvino rairo "trans":
$ trans-pfupiso yakanaka